Ciidamada booliiska qeybta gobolka Nugaal oo magaalada Garoowe ku qabtay 12 kartoon oo khamri ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada booliiska qeybta gobolka Nugaal oo magaalada Garoowe ku qabtay 12 kartoon oo khamri ah
December 13, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Khamrada ay ciidamadu soo qabteen waxaa ka muuqa in lagu farsameeyay dalka Itoobiya. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska gobolka Nugaal ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay kartoomo khamri ah, sida ay sheegeen saaraakiishu.
Ciidamada oo habeenimadii Talaadada ahayd howlgal ka sameeyay caasimada Puntland ee Garoowe ayaa kusoo qabtay 12 kartoon oo khamri ah iyo shan nin oo watay.
Ciidamada ayaa sidoo kale waxay qabteen afar gaari, baastoolad iyo qori AK-47 ah oo ay wateen nimanka khamriga lagu soo qabtay.
Taliyaha booliiska qeybta gobolka Nugaal Cabdirashiid Maxamuud Aw-xuseen oo loo yaqaan (Xinjira-dhuuq) oo saxaafada kula hadlay Garoowe ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay labo jibaareen howlgalada ammaanka lagu sugayo iyo la dagaalanka maandooriyaha.
Xinjira-dhuuq ayaa ammaan u jeediyay ciidamada soo qabtay khamriga iyo nimanka watay.
Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Maxamed oo ka hadlay goobta ay ciidamada kusoo bandhigeen kartoomada khamriga ah iyo nimanka watay ayaa sheegay in ay ku daba joogaan shakhsiyaad kale oo ka ganacsada khamriga, Cumar ayaa balanqaaday in sharciga la geyn doono cid walba oo ku lug leh khamrigan.
Maandooriyaha khamriga ayaa sanadadii ugu dambeeyay kusoo badanayay gobolada Puntland, iyadoo laga soo gasho dalka Itoobiya oo lagu sameeyo.
August 21, 2016 Ugu yaraan 12 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay Gaalkacyo
December 24, 2017 Ugu yaraan 15 qof oo ku geeriyootay dagaal beeleed ka dhacay deegaanada miyiga ee kuyaala xadka gobolada Nugaal iyo Sool
January 12, 2020 Xilliga la fulinyo toogashada saddex nin oo lagu helay kufsi iyo dil gabar yar oo la shaaciyay
Bosaso-(Puntland Mirror) More than 400 of Qandala residents have fled their homes, fearing clashes after pro-ISIS militants arrived there, residents said. Mohamed Hersi, a resident in Bosaso port town of Bari region, told Puntland Mirror [...]